Maxey Sameeyeen Guardiola Iyo Shaqaalahiisa Kadib Dhamaadka Qeybta Hore? Xilli La Sharraxay Sababta TAA Rigoore Looga Dhigi Waayay. | Laacib.net
Maxey Sameeyeen Guardiola Iyo Shaqaalahiisa Kadib Dhamaadka Qeybta Hore? Xilli La Sharraxay Sababta TAA Rigoore Looga Dhigi Waayay.
Pep Guardiola iyo dhamaan shaqaalahiisa tababarka wariyaha Sky Sports u joogay garoonka ee Geoff Shreeves si ay u ogaadaan sababta aan rigoore loogu dhigin qeybtii hore ciyaarta, wuxuuna dhacay ficilka markii garsooraha uu ka dhawaajiyay seeriga muujinayay in ciyaarta qeybta hore soo idlaatay.
Sida uu sheegayo wariye Geoff Shreeves oo hillinka Sky Sports ka tirsan, Pep Guardiola si weyn ayuu kaga carooday go’aankii uusan garsooraha kooxdiisa ku siinin rigore, wuxuuna ahaa mid mar walba doonaya inuu ogaado sababta.
Liverpool ayaa daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta akoonka goolasha kulanka furatay kadib markii Fabinho uu shabaqa gaaray, balse goolka wuxuu yimid 20-ilbiriqsi kadib markii Arnold uu kubad gacanta ku taabtay isagoo ku sugan xerada ganaaxa, balse lama dhageysan cabashadii ay ciyaartoyda Man City u gudbiyeen garsoorka.
Aaladda VAR ayaa lagu hubiyay dhacdada, dhawr jeer oo muuqaalada la daawaday, waxaa soo baxday in la ansixiyo goolka, waxeyna lama filaan iyo wax aan la aamini karin ku noqotay xiddigaha iyo shaqaalaha tababarka Citizens.
Premier League ayaa ciyaarta kadib sharraxay sababta aan Man City rigoore loogu abaalmarin, waaana la sheegay in kubadda marka hore ku dhacday gacanta Bernardo Silva ka hor inta aysan gaarin gacanta TAA.
Balse sida uu sheegay Shreeves, Guardiola kuma faraxsaneyn wixii dhacay, wuxuuna doonayay inuu ogaado sababta aan rigoore loogu dhigin.
“Pep aad ayuu u carooday” ayuu yiri Shreeve oo la hadlayay Sky Sports. “Isaga iyo dhamaan shaqalahiisa tababarka ayaa nagu hareersamay dhamaadka qeybtii hore, waxeyna na weydiiyeen, sababta uusan garsooraha rigoore u siinin?